နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: G- Talk Eng-Myanmar Online Dictionary (Partially Finish)
G- Talk Eng-Myanmar Online Dictionary (Partially Finish)
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပို့လာတဲ့ မေးလ်ထဲကပါ...။
Gtalk က အင်္ဂလိပ်မြန်မာအဘိဓါန်တဲ့.......
- ပုံမှန် Gtalk ကနေ add တဲ့နည်းအတိုင်းပဲ။
- add box ကစာသားဖြစ်တဲ့ user@gmail.com အားလုံးကိုဖျက်လိုက်ပါ။
- ပြီးရင် en2mm@mmgeeks.org ကို add လိုက်ပါ။ပြီရင် finish ပေါ့
-အကယ်လို့ ကြားထဲမှာ တဆင့်ခံနေသေးရင် next ကိုသာနှိပ်လိုက်ပါ။
-ကိုယ် Gtalk box မှာ add လုပ်လိုက်တာလေးက မီးစိမ်းသည်ဖြစ်စေ မစိမ်းသည်ဖြစ်စေ
ဖွင့်ပြီး cat, arrow. eat စသည်ဖြင့်ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါ။
လေ့လာ စမ်းသပ်သူ မောင်ဘွိုင်း ၏ သုံးသပ်ချက်။
- ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
- လိုအပ်ချက်များ ရှိပါသေးသည်။
- အသုံးများ စကားလုံးများ မပါဝင်သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
- ဥပမာ - အင်္ဂလိပ်လ နာမည်များ။ အင်္ဂလိပ် ဂဏန်းများ ကို ရိုက်ထည့်ကြည့်ရာ “Your word is not found in our dictionary.” ဟူသော အသိပေးချက် ပေါ်သည်။
- die ဟူသည့် စာလုံးကို ရိုက်ကြည့်ရာ Sorry, your word is not in dictionary. ဟု သတိပေးချက် ပေါ်သည်။
စာလုံးများ ထပ်မံဖြည့်တင်းပေးမည် ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ အခမဲ့လော၊ အခကြေးငွေနှင့်လော ဆိုသည်ကိုမူ သတင်းမရသေးချေ။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:18 PM
Labels: dictionary, Gtalk, Myanmar, Online
ksanchaung January 13, 2009 at 12:36 AM
စမ်းသပ်၍ ပြီးစီးကြောင်း။ ပြည့်စုံသောတစ်နေ့ အသုံးတွင်ကျယ်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း။
khin oo may January 13, 2009 at 1:57 AM
ရေးချင်တာတွေ ရေးတော့လဲ ဖတ်ရတာပေါ့လေ.
khin oo may January 13, 2009 at 1:58 AM
ခိုင်းတိုင်း လုပ်မယ်များထင်နေသလား။ no
မီယာ January 13, 2009 at 5:11 AM
chat နေရင်း အဓိပ္ပါယ်နားမလည်ရင် ရှာကြည့်ဖို့လား။ မသိလို့ပါ။
khin oo may January 13, 2009 at 6:11 AM
juli January 13, 2009 at 10:04 AM
chatting အတွက်ဆိုရင် တော့ burglish ကိုပိုအားသန်ပါတယ်။ dic ရှာရတာ ကြာလို့။ ပြီးတော့ foreigner friend လည်းမရှိလို့ ပါ။
khin oo may January 15, 2009 at 12:02 AM
အခုတစ်လော ငြိမ်နေတယ် လို့တော့ အကြောင်းသိတွေ ကပြောကြမယ်။ ဘာလို့ ငြိမ်နေသလဲ ဆိုတော့ စိတ်မရွင်လို့ပေါ့။ criteria ရေးတာ အလကား မဟုတ်ဘူး။ စိတ်မရွင် လို့ ရေးဘို့ ကြံပေမဲ့လည်း အကြံမရလို့ အဲလို စဉ်းစားမိသွားတယ်။ စိတ်က ဘာလို့ မရွင်လဲ။ အကြောင်းအမျိုးမျိူးကြောင့်ပေါ့။ အသေးစိတ်တော့ မပြောပရစေနဲ့တော့။
အလုပ်လည်းပင်ပန်းတယ် အခုတစ်လော။ ထမင်းတောင် ကောင်းကောင်းမစားဖြစ်ဘူး။ ထမင်းကတော့ တမင် သွားမစားတော့တာပါ။ နဲနဲများ ပိန်မလားလို့ မနက်ပိုင်းကို ပေါက်စီ စားပြီး နက်စ်ကော်ဖီဘူး သောက် လိုက်တယ်။ ၂ ရက်ရှိပါပြီ။ ရန်ကုန် ပြန်ဘို့ စိတ်ကူးထားတယ်။ဒီနစ်ထဲ ဝနေရင် အမျိုးတွေ က အလန့်တကြား ဟယ်. ဝလိုက်တာ. ဝလိုက်တာ လို့ပြောရင် စိတ်ထိခိုက်နေရဦးမယ်။ ဟိုရောက်ရင် ၂ ပါတ် အတွင်း ၆ ပေါင် တက်ဘို့လည်း ကြိုပြင်ထားရဦးမယ်။
လမ်းလျေက်ရလို့ ကြွက်တောင် တက်ပါတယ် ဆိုရင်လဲ ပိုတယ် လို့ပြောကြဦးမယ်။ တကယ်။ ညဘက် အိပ်ရင်းနဲ့ ကြွက်တက်လို့ လန့်နိုးလာတာ နာလိုက်တာ ဘယ်ဘက် ခြေ သလုံး က အကြောတွေ တောင့်ြ့ပီး အသည်းခိုက် အောင်နာပါတယ်။ ကြွက်တက် နေ ကျ မို့လို့ ကိုယ့်ခြေမကိုယ် ပြန်ချိုးလိုက်တယ် ဘာဆိုင်သလဲ တော့မသိဘူး။ ဖြည်းဖြည်းချင်း အနာ လျှော့သွားတယ်။
အိပ်မယ်လို့စိတ်မကူးဘဲနဲ့လဲ ခဏဆို လှဲလိုက်တယ်။ ခလောက် ဆိုပြီး ခလော ကနဲ အိပ် ပျော် သွားလို့ရေတောင် မချိူးလိုက်ရဘူး။
ကိုယ်က ပြင်တုံး သူက တော့ လက်မှတ်ဝယ်ပြီးသွားပါပြီ။ သူ့အတွက် လက်မှတ် ဝယ်နေတာ ကြာပြီ. မရဘူး. လက်မှတ် ကုန်သွားပြီ။ seat မရှိတော့ဘူး။ waiting list ထဲ ထည့်ခိုင်းထားတာတောင် မျော်လင့်ချက် မရှိဘူး ဆိုလို့ စိတ်ဓါတ် ကျနေတာ။ အခုတော့ အကြောင်းအမျိုးမျှိူးနဲ့် လက်မှတ် ရသွားပါပြီ.။
ကိုယ်က အေးအေးဆေးဆေး ကြိုက်တဲ့အချိန်ပြန်လို့ ရတယ်။ ခါတိုင်းဆိုရင် လေးလ လောက် အလိုကတည်းက သူ့အတွက် booking တင်ထားတတ်တယ်။ အခုတလော ဘလော့ကိုက်ပြီး virtual world ထဲနေလိုက်တာ လောက နဲ့ အဆက် အသွယ်ပြတ်သွားပြီး မေ့သွားတယ်။ ကိုယ်မလိုက်သွားဘူးလား မေးဦးမလို့လား.. မမေးနဲ့တော့။ မေးစရာ မလိုဘူး.။ ထုံးစံအတိုင်း..။ အကြော်နဲ့ နစ်ပွဲ.။
khin oo may January 15, 2009 at 6:15 AM
15 Jan 09, 05:36
15 Jan 09, 05:35
15 Jan 09, 05:34
14 Jan 09, 22:22
14 Jan 09, 21:12
sin dan lar: :cool:
14 Jan 09, 09:37
sin dan lar: လွမ်းလို့ကျန်ခဲ့မှာကို အားနာပါတယ်လေ... တိန်... ပုံငြိမ်းကျော်
14 Jan 09, 06:20
13 Jan 09, 23:15
sin dan lar: :biggrin: အရက်သမား ၂ ယောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်အိမ်ပြန်ပို့ သလိုဖြစ်နေပြီထင်ပါ့ ... ဟိ
Boyz: အိပ်ပြီဗျို့...။ အားလုံပဲ.. တာ့တာ
13 Jan 09, 23:04
13 Jan 09, 22:56
sin dan lar: ဘိုင့်ဘိုင်ကိုဘွိုက်ဇ်
sin dan lar: စိတ်ချပါ.. အိမ်ကိုရေလောင်းထားမယ်..(ဖုန်မတက်အောင်..)နောက်ကြောင်းအေးအေးသာသွားပါ။ စိဘောက်စ်မှ မိတ်ဆွေများအားလုံးနဲက အခင်မင်ပျက်အောင်လုပ်ထားပါမယ်။ ပျော်၇ွှင်၊ အဆင်ပြေသောခရီးဖြစ်ပါစေ
Boyz: yes.. tomorrow will fly into the sea.. bye bye sin sin
13 Jan 09, 22:36
sin dan lar: ဟေး.... ရောက်တွားပြန်ပြီပေါ့
Boyz: Hi from Miri....
MayMoe: တာ့တာ။ :P
N: ၂၀၀၇ နှစ်ကုန်ပိုင်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ယိုးဒယားဗီဇာကို နေ့ ချင်းပြီး သွားယူတယ် ကြားဖူးတယ်။ ပိုက်ဆံပိုပေးရတယ်ဆိုလား.. အခုတော့ မသိ..
13 Jan 09, 15:09
ksanchaung: သွားပြီဆိုပဲ။ ရန်မဖြစ်ကြနဲ့။ မုန့်ဝယ်လာမယ်ဆိုပဲ။ (ဟုတ်ကဲ့ပါအဖေ။ သောက်လည်းသောက်၊ ပင်လယ်ပြင်ကိုလည်း စောင့်ရှောက်ပေါ့။)
13 Jan 09, 07:26
danTanDan: good morning
13 Jan 09, 06:15
နောင်သူ: ပိုက်ဆံချီးဗျာ ( အင်အားဖြစ်လားဟင် ဒါကော)
13 Jan 09, 06:12
13 Jan 09, 01:59
kom: haveanice trip. :P
13 Jan 09, 01:58
13 Jan 09, 01:39
မနောသား: လာလည်သွားပါတယ် ခင်ဗျာ ..စာတွေ ဖတ်သွားပါတယ် ..ပျော်ရွင်ပါစေ ပြန်လာလည်ဖို့လဲ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ..
12 Jan 09, 23:53
Boyz: ဟယ်...။ ဘယ်လိုလုပ် သိတာလဲ မေထုံ...။ ဒီနေရာကျတော့ မထုံတော့ပြန်ပါလား...။
12 Jan 09, 23:50
MayMoe: ကိုBoyz ကသောကြာသားလား (သိချင်ယုံ သက်သက်ပါ စကားများတယ်လို့ပြောချင်းမဟုတ်) :P
12 Jan 09, 22:04
Boyz: ပြန်လာရင် ရုံးဖွင့်ရက် တစ်ရက်ပဲ ရှိမှာလား မသိ။ ဒီနေ့တင် နက်ဖြန်ရဆို မိုက်မယ်။
kom: ကာကာ :zonked: နေပြန်ပြီ။ no idea..ဟိုတုံးကတော့ ဒီနေ့ပေး နက်ဖြန်ရတယ် မဟုတ်လား။ မီးကင်းစောင့်သလိုပေါ့။စိတ်ချပါ။
12 Jan 09, 21:53
Boyz: ယိုးးယားဗီဇာကို တစ်ရက် နှစ်ရက်အတွင်း လိုချင်တယ်။ အမြန်နော်။ Any Idea
12 Jan 09, 21:44
Boyz: Tuesday ကို အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ခေတ္တ ပျောက်ကွယ်နေပါမယ်။ အိမ်ကို သေချာ စောင့်ရှောက်ကြပါ။ သူခိုးမကပ်စေနဲ့။ ညရေးညတာ အိပ်ဖန်စောင့်ပေးကြပါ။
12 Jan 09, 21:33
12 Jan 09, 20:53
ksanchaung: ပင်လယ်ထဲသွားမယ်ဆိုပဲ။ Pirates Of The Carribean ပေါ့။
12 Jan 09, 20:33
kom: လိုရင်းတွေပျောက် ကုန်ပြီ. ဘယ်တော့ခရီးသွားမှာလဲ ပြော။
12 Jan 09, 20:05
sin dan lar: ကလိုင်နဲက မခေါက်တော့ဘူး။ ခုကျောင်းတက်ကျောင်းဆင်း လျပ်စစ်ဘဲလ်တွေတီးတယ်လေ.... :P :biggrin: ဟိဟိ ပျော်တာ
12 Jan 09, 19:40
Boyz: မဆိုင်တဲ့ အပေါက်က ကလိုင်နဲ့ လာခေါက်နေချင်သေးတယ် ဒေါ်ဆင်...။ Dowsen ကို ပြောတာ မဟုတ်...။
12 Jan 09, 19:05
sin dan lar: လျှော့လို့မရတာက ခါးပတ်က အပေါက်ဆုံးရောက်နေလို့ပေါ့.... ခွိ
Boyz: လျှော့လို့ မရဘူးကွယ်... နန်းညီရယ်...။
နန်းညီ: ခွိ ခွိ.. စိတ်လျှော့မှပေါ့
နန်းညီ: ပီဘွိုက်ဇ် zzzz..အာရာမေ လာဖတ်လှည့်
12 Jan 09, 16:05
Boyz: ဆင်ဆင်က ဒေါနဒွေဂျီးပဲ...။ သပြေလေး ဘာလေး တင်တာ မဟုတ်ဘူး...။
sin dan lar: ဖတ်တယ်လေ.. ဖိုရမ်ကို ဘာလို့ ရှောင်မှာလဲမှ မေ၇းထားတာ..ဟွန့် :furious:
12 Jan 09, 10:38
တောင်ပေါ်သား: အလည်လာ ရုပ်ရှင်ကြည့်သွားပါတယ် :)
12 Jan 09, 10:17
Boyz: ရောက်တာနဲ့ စတာပဲ။ အစအဆုံးလေး ဖတ်သွားတာ မဟုတ်ဘူး။ ဆင်ထုံ.. ဆင်ထုံ...။
12 Jan 09, 09:36
sin dan lar: သူတို့ဘာတွေပြောနေကြပါလိမ့်
12 Jan 09, 06:30
kom: စိတ်ချပါလေ..ရှောင်နေရမဲ့ ရက်တွေရောက်လာပါတော့မယ်။ အေးချမ်းပါစေ.။ မောနင်း.
12 Jan 09, 01:19
Boyz: ရေတစ်ပွက်စာ အတွေး...။
12 Jan 09, 01:18
Boyz: နောင်ဆို ဖိုရမ်ကို ရှောင်နေမှ ဖြစ်မယ်လို့ မခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမိတယ်...။
Boyz: ခုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ ပြန်ကြည့်ရတော့မယ်။ လောက မာယာ အတော်များသတဲ့။ ခေါင်းကို ချာလပတ်ရမ်းသွားတာပဲအေ့ လို့ အော်ရမလို ဖြစ်နေပြီ...။
12 Jan 09, 01:05
Boyz: နာလူပြိန်းလားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်တွေးနေတယ်...။
12 Jan 09, 01:02
TZA: ကျွမ်းကျင်သူ၂ယောက် ဆွေးနွေးခန်းကို ဝင်ဖတ်၊ ဝင်ပွတ်သွားတယ်၊ ဟီးဟီး...
Boyz: ဂွဒ်နိုက် အမ်းမား
12 Jan 09, 00:56
Boyz: mm နေတဲ့နေရာမှာ ဘယ်မြင်သေးမှာလဲလို့။ အာလူးကြိုက်ရင် ဝယ်စားပါ့လား
12 Jan 09, 00:53
kom: :P gn
12 Jan 09, 00:31
Boyz:ြဲမူတွေ ဖုံးနေတယ် ထင်ပါ့..။ လကို မတွေ့ကြဘူးတဲ့..။ ခုလေးတင် တွေ့လိုက်တယ်
12 Jan 09, 00:23
Boyz: မပိုရပါဘူးဗျာ...။ အခုကို ထွက်ကြည့်ပါလား...။ သာနေတဲ့လ။ တော်တော်ကြီးပြီး လင်းထိန်နေတာပဲ။
Boyz: စံတော်ချိန် - ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက် ၁၂း၂၂ နာရီ (ည) ကျွန်းပိစိ
12 Jan 09, 00:05
Boyz: ချယ်လ်ဆီးကတော့ ဒီပွဲနိုင်ရင် နောက်ကနေ တစ်မှတ်အလိုနဲ့ ကြိုးကြာနီကို ဖိအားပေးနိုင်ပါသည်။
12 Jan 09, 00:04
Boyz: မန်ယူ ပရိသတ် မဟုတ်ပါ။ ကြိုးကြာနီ ပရိသတ် ဖြစ်ပါသည် ကိုရင် ဒီဘီအေ...။ ခုနကတော့ ဘေးနားက အစ်ကိုတော် ကြည့်နေတာ တွေ့ရသည်။ ဘယ်နှစ်လုံးလဲ မသိ။ သူ ၃ ပွဲစလုံး နိုင်မှ ကြိုးကြာနီကို ကျော်နိုင်ပါမည်။
MrDBA: မန်ယူပွဲကြည့်လိုက်ဦးမယ် ကဘွိုက်
11 Jan 09, 22:39
Boyz: အော်...ပုလုကွေးဆိုတာ ကိုအိုကေဂျီး ကိုး....။
11 Jan 09, 21:58
Boyz: ဆင်ဆင်... ဆင်ဆင်..။ ခရေတန်း - ဘာတွေရသွားလဲ..။ အမ်းမား ခိုးလဲ မခိုးဘူး၊ သောက်လဲ မသောက်ဘူး။ ပုလုကွေ - လိုက်လည်မယ်။
11 Jan 09, 21:57
ပုလုကွေး: အလည်လာပါတယ်ဗျာ. ကျတော်သံရုံးကို သောကြာနေ့က သွားတာ ဗျ. အလည်လာပါအုံး
11 Jan 09, 18:56
Craton: သားသားလာဒယ် ဒန် ဒန့် ဒန်
11 Jan 09, 13:18
kom: ကိုဘ (အရက် မခိုးရ)
11 Jan 09, 12:58
sin dan lar: မမကေအိုအမ်မှာချက်နေလို့ ဒီကို တိတ်တိတ်လာတာ သိသွားပြန်ပြီ :furious:
11 Jan 09, 12:57
sin dan lar: ရူးချင်ယောင်ဆောင်ခြင်း
sin dan lar: မီတယ်ဟေ့.. ဘာကိုပြောတာလဲ... အရပ်လား
11 Jan 09, 12:56
Boyz: ဆင်ဆင်က မမှီတာ မမှိဘူး မပြောဘူး...။ ဟဟ
sin dan lar: ဟုတ်တယ်မမ.. ခွင့်မတောင်းပဲ မလုပ်သင့်ဘူး....။ မီးလောင်ရာလေပင့်၊ အဆင်းဘီးတပ်ခြင်း :P
11 Jan 09, 12:48
Boyz: မလွတ်မကင်း မပါပါဘူး...။
Boyz: ကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေ ရွေးထားတာပါဂျာ...
kom: သူများကိုပြောတော့ စီဘောက်ထဲက ဟာတွေ save လုပ်ထားတယ်။
11 Jan 09, 12:47
11 Jan 09, 12:35
sin dan lar: ကောမန့်ရေးနေတာ
sin dan lar: အန်.. သွားပါဘူး.. ဘယ်မှ
11 Jan 09, 12:28
Boyz: ဆင်ထုံက ဘယ်သွားမှာတဲ့တုန်း
sin dan lar: Good Day
11 Jan 09, 11:47
Boyz: အမေရိကားမှာဆို အရှေ့မြောက် ပြည်နယ် ပိုပြီး ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ရမယ်တဲ့။ နှင်းမုန်တိုင်း မရှိတဲ့ နေရာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ရာသီဥတုရင်လဲ ကောင်းနေမှ..။
11 Jan 09, 11:36
Boyz: ကာကာ.. နေကောင်းပါ့...။ ဘယ်မှ မသွားဘူးလား...
Boyz: ဒီညလဲ တွေ့နိုဖို့ အခွင့်အလမ်း ရှိပါသေးတယ်။
Boyz: ညတောင် မဟုတ်ဘူး.. မနက် ၂း၃၀ နာရီလောက်
11 Jan 09, 11:35
Boyz: ညက သတိရတော့ အခန်းကို မီးပိတ်ပြီး အပြင်ဘက်ကို ငေးကြည့်ချိန်။ သတင်းစာကောင်းကောင်းဖတ်လို့ရတယ်ဗျာ...။
11 Jan 09, 11:31
11 Jan 09, 11:25
danTanDan: ကိုboyzရယ်ညကပြောရောပေါ့ တခါဒဲအိမ်ပြင်ထွက်ကြည့်မှာပေါ့ ခုဒေါ့...
Boyz: ၂၀၀၉ ခုနှစ်အတွက် အတောက်ပဆုံးနဲ့ အကြီးမားဆုံး အရွယ်အစားပါတဲ့...။
Boyz: ဒီညလဲ လပြည့်ဝန်းကြီးကို ထွက်ငေးကြဦးစို့...။
11 Jan 09, 10:31
Boyz: အားလုံး ကောင်းသောနေ့ပါ...။
Boyz: မိန်လာပါ မီယာ...။
11 Jan 09, 04:20
မီယာ: hello ကိုဘ
11 Jan 09, 02:56
11 Jan 09, 02:47
Boyz: စက်ပိတ်ပြီး reset ချလိုက်ဦးမယ်။
Boyz: ဘယ်လိုမှ မတက်တော့တာ...
11 Jan 09, 02:26
ksanchaung: စီဘောက်စ်က ဖြစ်တာနေလိမ့်မယ်။ ငါ ဒီမှာ download က အကောင်းပဲ။
11 Jan 09, 02:25
Boyz: အခုက ရန်ကုန်နီးပါး ဖြစ်နေတာပါဗျာ...။ စာတစ်ကြောင်းတက်လာဖို့အရေး မနည်းစောင့်နေရဒယ်...။
11 Jan 09, 02:24
ksanchaung: ရန်ကုန်လောက်မဆိုးဘူး။ စိတ်လျှော့ မောင်ရင်။
Boyz: internet connection အလွန်နှေးနေပါသည်။ maintenance များ လုပ်နေကြလား မသိ...။ ဒီနေ့က ကြာသပတေးနေ့လဲ မဟုတ်ရပါဘူး...။
11 Jan 09, 02:22
Boyz: အဲဒီ ဖိုးသိကြားဆိုတဲ့ အကောင် မန်းလေး ရောက်ကတည်းက မတွေ့ဖြစ်တာ ခုထိပဲ...။
Boyz: အခုမှ စခြောက်တာလား... ခြောက်လို့ မွမွကြွေဗြုန်းသွားပြီ ထင်နေတာ...။
11 Jan 09, 02:21
Boyz: Good Night
Boyz: Good Eveningတဲ့...
Boyz: ကပ်တာ ထိုးတာ ထားလိုက်ပါ.. လှတာ ပြောချင်တာ
ksanchaung: စကားမစပ် ဂျီအင် ဆိုတာ ဘာလဲ။
11 Jan 09, 02:20
Boyz: ဖိုးသိကြား မသေသေးဘူးလားဗျာ...။
kom: တက်တူးကပ် လာတာ နေမှာပါအေ. ရီုးပြန်ပြီ
Boyz: လိပ်ပြာပုံ၊ နှင်းဆီပန်းပုံ။ အသဲနှလံးပုံပေါ့လေ
11 Jan 09, 0
khin oo may January 17, 2009 at 12:23 AM
ဒီနေ့ သူငယ်ချင်း. msd ပျောက်နေလို့ လိုက်ရှာရ တယ်။ တော်ကြာနေမှ ပေါ်လာတယ်။ ဘာဖြစ် နေသတုံး ။ မေးတော့ တယ်လီဖုံးeပိုက်ထဲ ပြူတ်ကျသွားတယ်လို့ သ တင်း ပို့ တယ်။
မည်သို့မည်ပုံ ဖြစ်သွားသည်မသိ.။ ပြန်မရလိုက် အောက် ဆင်းသွားပြီ လို့ ဆိုတယ်။ ရိုးရိုးထိုင် နဲ့ ဘိုထိုင် မှာ ရိုးရိုးထိုင် မှာ လို့ ဆိုတယ်။ ကြားဘူးတဲ့ ပုံပြင်ကတော့ ဘိုထိုင်မှာ ပြူတ်ကျဘူးတဲ့ ပုံပြင် တွေ ဘဲ။ ပြန်ကောက်ပြီး နေလှမ်းလို့ ရသေးတယ်။ ဒါက တော့ နဲနဲ ကွဲလွဲနေတယ်။ ဘုတ် ဆိုပြီး အသံ ကလေး မြည်ပြီး တာနဲ့ ကလောက် ..ကလောက်...ဆိုပြီး ဝင်သွားတာ မမြင်ရတော့ဘူး ဆိုဘဲ။ နှမျောစရာ…
သံယောဇဉ်နဲ့မို့လို့ ဖုံးဆက် ကြည့်သေးတယ် ဆိုဘဲ။ မိန်းမ တစ်ယောက် က ကိုင်ပြီး ဆက် သွယ်လို့ မ ရ ပါ လို့ ဖြေသတဲ့ကွယ်. ။ ပုံပြင်လေးကတော့ဒါပါဘဲ။
စလုံးကလူတွေ ဖုန်းအသစ် ကိုင်နေကြပြီထင်တယ် လို့မှတ်ပြီး ဖတ်တာ ဟားဟား ရီရတယ်။ နှမြောစရာကြီးနော်။ မီယာလည်း ဖုန်းတစ်လုံး ကို ရေဆေးလိုက်တာ ကြွသွားတယ်။ ကိုဘကြားရင် တော်တော် ထုံတာပဲလို့ ပြောမှာ ကြားယောင်တယ်။
khin oo may January 17, 2009 at 9:20 AM
17 Jan 09, 09:17
kom: ဆန်ခွက် ဆန်ခွက်.
kom: အိုကေ..စီပုါံ်ပြောင်းလိုက်ဦးမယ်။ ko boyz ဆီသွားမယ်။ နားအေးပါးအေ.း.
TZA: ပုံးငှားတယ်.. ပုံးငှားတယ်.. တမိနစ်၂ကျပ်.. တမိနစ်၂ကျပ်.. အချင်းချင်းတွေ ၁ကျပ်ခွဲနဲ့ပေးမယ်.. နှစ်မကူးခင် ငှားထားကြပါ..
17 Jan 09, 09:16
TZA: အလို.. မင်္ဂလာပါအစ်မခင်ဦးမေ.. အိမ်ရှင်ညာသံပေးတာ.. အဟမ်း.. အဟမ်း..
17 Jan 09, 09:15
kom: မဇနိ လိုက်ရှာနေလို့.. ဒီပုံးကိုဘဲ ကိုယ့်ပုံ့းလုပ်လိုက်ပြီ။။။
17 Jan 09, 09:14
kom: အိမ်ရျှင်လဲ လှည့်မကြည့်အား... good.. အားလုံးမင်္ဂလာပါ။
kom: ကက်ပတိန်ခွင့်စာမှ ပါသွားရဲ့လားမသိ.။
17 Jan 09, 09:13
kom: strike အပြင်သွားတယ်တဲ့...ဝေး... ..............ငါ ကြောက်ရမဲ့သူ မရှိဘူး.........ဒီကမ္ဘာ မှာ...လောလောဆယ်..
17 Jan 09, 09:12
kom: ကက်ပတိန်တော့လိန်ပျံကြီးနှဲုသွားပြီ.. အရေးရယ်အကြောင်းရယ် ပိုက်ပိုက် မှ ရှိပါ့မလားမသိ..
17 Jan 09, 08:42
17 Jan 09, 08:32
kom: စကားမစပ်..စလုံး ကနေ ပို့တဲ့ ငွေ ဈေးက ပြူတ် ကျနေသမျှ ဝက်ဝက် ကွဲ…မေးကြည့်လိုက်ပါဦး..
17 Jan 09, 08:31
kom: ဒီအချိန်ကို ရောက်ရင် တို့ နှစ်ယောက် တွေ့နေကြ..ဒီနေရာလေး ဟာာ…..။ . အို..မောင် ဘယ်လို နေရမလဲ …ယောင်ချာ ချာ အရူးတပိုင်းဖြစ်နေပြီ..။ အရာရာတိုင်းဟာ မင်းအကြောင်းနဲ့ နွယ်ယှက် လာ..….မောင် မနေတတ် ဘူး….မောင်မေ
17 Jan 09, 06:41
strike: good nite..အပြင်သွားပီဗျား
strike: ကိုဆိုင်းအောင်ခင်ဗျား Active ဖြှစ်ရန်အရှိန်မရသေးပါအိမ်ပြောင်းဖို့ကိစ္စလုံးပန်းနေပါသည်၊၊ပြန် ဆက်ဝန်ကြီးကတော့ "ခရေဖြူ" ဆိုတာသိပြီးရောပေါ့
17 Jan 09, 04:59
ဆိုင်းအောင်: တီတီ KOM နှင့် Strike... အခုတလော သိပ် active မဖြစ်ဘူး... နေမကောင်းဘူးလား ..။ အီဘလောက်၏ စီဘောက်ရေးရာဝန်ကြီး ခရေဖြူ ကိုပါ နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ ... နေကောင်းတယ်ဟုတ် !
17 Jan 09, 04:58
ဆိုင်းအောင်: ကိုတီဇက်အေ... ထိုင်းသွားဖို့ အဆင်ပြေပြီလား? ခရီးသွားဆောင်းပါး ဖတ်ဖို့ အိပ်လိုက်၊ စားလိုက် စောင့်နေပါတယ် ....
17 Jan 09, 04:56
ဆိုင်းအောင်: ကိုတီဇက်အေ ၏ စီဘောက်ဖတ်ခြင်းဖြင့် မိမိဦးနှောက်ရေချိန်ကို မြင့်တင်ပါ။ တနေ့ထက် တနေ့ မျက်လုံးပိုမိုပြူးလာပါသည်။ နားမလည်သော စကားလုံးများကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာပြန်ခြင်းအမှု ပြုကြပါကုန် ...
17 Jan 09, 04:06
strike: သွတ်လုံးလဲဖတ်ပြီးပြီနော် pub သွားပြီး club သွားပြီ
17 Jan 09, 01:03
danTanDan: သွတ်ပြားအားလုံးဖတ်ပီးဘီ .. အိပ်တော့မယ်နော် .. bye all / good night
khin oo may January 17, 2009 at 9:23 AM
17 Jan 09, 09:22
kom: stay ရှောင်လာတယ်။ အခုမှဘဲ နားအေးပါးအေးရှိတော့တယ်။ မောနင်း. အားလုံးဘဲ မဂ်လာပါ။
17 Jan 09, 08:44
သန္တာ: ရောက်တယ်နော် ဦးဘွိုင်း ။ အလုပ်မှာ အဆင်ပြေပါစေနော်။
17 Jan 09, 00:46
ksanchaung: ခုလောက်ဆို မေခလာနဲ့တွေ့ပြီး ဒန်တန့်ဒန် ဖြစ်နေလောက်ပြီ။
16 Jan 09, 20:04
16 Jan 09, 10:44
သန္တာ: မတိုင်ပါနဲ့ မမရယ် သမီးနေ့တိုင်းရောက်ပါတယ်...
16 Jan 09, 08:06
sin dan lar: မမ.. သာမီးလာတယ်နော်..
16 Jan 09, 06:11
kom: thandar နဲ့ကာကာလည်းမလာကြဘူး. ကိုဘပြန်လာရင် တိုင်ပြောမယ်။ ပစ်ထားပါတယ်လို့။
15 Jan 09, 23:41
ksanchaung: မနေ့တစ်နေ့ကမှ ရောက်တာဆိုတော့ Civilized သိပ်မဖြစ်သေးဘူး။ လူလစ်ရင် လစ်သလိုပေါ့။
15 Jan 09, 23:34
kom: နနူ်းညီလုပ်တာ နှပ်တွေ ပေကုန်ပြိ။ ကိုစမ်းချောင်း..စလုံးမှာနေပြီး ဒဏ်ငွေ သုံးဆယ် မဆောင်ဘူးဘုးထင်တယ်။ စင်စင်.hi hi (ပုံ အိမ်ရှင် အတု)
15 Jan 09, 22:16
sin dan lar: ဟယ်..... ကိုစမ်းချောင်း... လုပ်သင့်သလား..။ လူဆိုးလေးးးး
15 Jan 09, 21:33
ksanchaung: ရော့ အင့်။
15 Jan 09, 21:32
ksanchaung: လူလစ်တုန်း အမှိုက်ဝင်ပစ်လိုက်ဦးမယ်။
15 Jan 09, 17:11
နန်းညီ: ဒေါ်ဆင်ကိုကူပြီး ဖုန်လာသုတ်ပေးတာပါ .. ဘန်နာပါ သုတ်သွားတယ်..
15 Jan 09, 14:17
phyu: I visited .
15 Jan 09, 10:42
sin dan lar: ဗွမ်းးးး စီပုံးကိုရေလာလောင်းသွားတယ် :P
15 Jan 09, 06:12
kom: စ်ိတ်အေးအေးထားပါ.အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ ရွာသူများမှ အပ။